Man United Oo Guul Ku Bilaabatay Booqashada Ay Ku Mareyso Mareykanka Xilli Lukaku & Lindolef Ay Ciyaareen Kulankoodii Ugu Horeysay - Laacib.net
Man United Oo Guul Ku Bilaabatay Booqashada Ay Ku Mareyso Mareykanka Xilli Lukaku & Lindolef Ay Ciyaareen Kulankoodii Ugu Horeysay
Manchester United ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Mareykanka ee LA Galaxy kulankoodii ugu horeeyay ee booqashada ay ku marayaan dalka Mareykanka iyadoo Romelu Lukaku iyo daafaca cusub Victor Lindelof ay ciyaareen kulankoodii ugu horeysay.
Man United ayaa 5-2 ku dardartay kooxda LA Galaxy iyadoo weeraryahaka da’da yar ee Ingariiska Marcus Rashford uu dhaliyay labo gool halka goolasha kale ay kala saxiixeen Maroune Fellaini, Henrikh Mkhitaryan iyo xiddiga lala xiriirinayo Inter Milan ee Anthony Martial.
Tababare Jose Mourinho ayaa labo shax oo kala duwan ku soo kala galay labadii qeyb ee ciyaarta isagoo isticmaalay inta badan ciyaartoydii uu u kaxeystay Mareykanka, waxaana ay ku abaalmariyeen guul raaxo leh.
Marcus Rashford ayaa labo gool dhaliyay 45tii daqiiqo ee uu ciyaaray iyadoo Maroune Fellaine uu gool dhex gashtay labada gool ee weeraryahanka Ingariiska.
United ayaa halkeeda ka sii waday goolasha ka dib markii la isagu soo laabtay qeybta labaad, Henrikh Mkhitaryan iyo Anthony Martial ayaana shabaqa soo taabtay, inkastoo LA Galaxy ay labo gool oo sabarsiin ah ay xilli danbe dhaliyeen.
Ciyaartaan ayaa waxa ay ka dhacday StubHub Center oo ku taala magaalada Los Angeles iyadoo ay u soo daawasho tageen 25,667 taageerayaal ah.
Man United waxa ay San Jose kula ciyaari doontaa Real Madrid, iyadoo sidoo kale u ambabixi doonta magaalada Washington DC oo ay kula ciyaarayaan kooxda Barcelona.